Ady & Fifandirana · Jolay, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Jolay, 2015
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Jolay, 2015
Manandrana Fanoherana Tsy Misy Herisetra “Ny Vondron’ny Fandriampahalemana” Any Kolombia
Amerika Latina 28 Jolay 2015
Satria mitohy ny fifampidinihana momba ny fandriampahalemana Kolombiana mba hamaranana ny herisetra sivily naharitra am-polony taona maro teo amin'ny governemanta sy ny mpihoko, mitaky sata tsy miandany ho an'ny tenany amin'ny anaran'ny fandriampahalemana ireo vondrom-piarahamonina sasany.
Afrika Mainty 24 Jolay 2015
Namerina indray ny fanafihany firenena Afrikana maro ny Boko Haram tato anatin'ny herindrano maro lasa. Ireto ny famintinana ireo fifandonana nisy tamin'ity taona ity tany amin'ny faritra hatramin'ny anio.
Tafika Meksikana Nampangaina Ho Nitifitra Olon-tsotra Nandritra Ny Fanafihana Tany Michoacán
Amerika Latina 23 Jolay 2015
Nitatitra ny media tsy miankina fa nitifitra olon-tsotra tamin'ny vondrom-piarahamonina teratany any Ostula ao amin'ny fanjakana Michoacán ny Tafika Meksikana. Milaza ny media iray eo an-toerana fa nisy ankizy lahy iray 12 taona maty.
Mpanao Gazety Voasambotra Noho Ny Fitantarana Ny Fipoahana Baomba Tao Ivelan'ny Foibe Italiana Ao Kairo
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Jolay 2015
Lehilahy iray no namoy ny ainy ary mpanoratra gazety maromaro no voasambotra taorian'ny fipoahana baomba fiara tao ivelan'ny foibe Italiana ao afovoan'i Kairo.
Jirihan'ny ISIS Ilay Tranonkala Siriana Fanarahana Maso Ny Zon'Olombelona Ary Rahonany Ny Talen'izy io
Voalaza fa rahonan'ny miaramilan'ny aterineton'ny ISIS ilay Siriana, Rami Abdelrahman, talen'ny Fanarahana maso ny zon'olombelona, noho ny andraikitra notànany tamin'ny fandraketana ireo fanitsakitsahana zon'olombelona nataon'ny mpisehatra rehetra tamin'ny ady misy ankehitriny ao Syria.